JIMCAALE Dilkiisu waa Cadaaladii, Xeerkii iyo Xaqii oo Lagu Dhagaroobay | Xeegonews.com
JIMCAALE Dilkiisu waa Cadaaladii, Xeerkii iyo Xaqii oo Lagu Dhagaroobay
Waxaan idiin doornay Editorial-kan oon ka soo xiganay Wadhaf News oo noo fasaxayna inaan daabacno; Waa xasuus Inankeenii xaqdarada lagu dilay.
Waxaa curtay sanad cusub oo rajo xambaarsan. Waa 2013 oo maanta kow ah oo xalay saqdii dhexe dhashay aduunweynahana laga xusay. Dadbaa jira aanay u suuto galin inay xusaan sanadka cusub. Dadkaas waxaa ka mid wiil dhaliyaro ah oo uu sanadka cusub ugu curtay qabriga lama huraanka ah ee aadamuhu wada geli doono. Allah ha u naxariistee, waa wiil caafimaad qabay, rajo iyo hammi balaadhan hortiisa yaaleen oo mustaqabalkiisu u iftiimaayay. Wuxuu ahaa wiil dhalin yar oo firfircoon oon aaminsanahay in maankiisa iyo qalbigiisa ay ku jireen qorshe nololeedkiisa iyo hamigiisa sanadkan 2013 ee isaga qabriga ugu curtay. Waa JIMCAALE CABDI MAXAMUUD.
. Maalin iyo saacado markay ka hadheen sanadkan cusub, cabaaro shantii iyo badhkii galabnimo ee 30/12/2012 waxaa JIMCAALE CABDI MAXAMUUD haleelay rasaas meegaar weyn oo jidhkiisa lagu rusheeyay. Dhulka markuu ku dhacay wuxuu u ruqaansaday geed hoostii. Ma kici karo, gurmad ula carara xagga dhakhtarka dhaqso uma helin, wuu dhiig-baxay, degdegna Koomuu u galay. Rasaas AK47 ka dhacday ma ahayn waxa haleelay JIMCAALE. Qori ka afweyn AK47 ayaa lagu weeraray wiilka. Dhakhtarka dhexdiisa ayay naftu kaga baxda. Ubaxii baxaayay halkaas ayuu ku dhintay. Shalay oo sanadkii hore ugu dambaysay (31/12/2012) ayaa la aasay Jimcaale. Inaalilaahi wa inaa Ilaahi raajicuun.
Waa geeri xasuusteena ku soo celinaysa geeridii tan la midka ahayd ee wiilkale oo dhalin yara lagu dul sadqeeyay jinaasadii shuhadadii jidgooyada lagu qalay 2009-kii. Waa Cabdifataax Maxamed qamaan oo 12 jir ahaa oo askari ku toogtay Borama, July 12, 2009-kii
Waa geeri naxdin badan leh waxaanan ka warqabnaa sida waxashnimada leh ee askar-ku-sheegu rasaas ula boobeen mustaqbalkii ummada. Murugada geeridu hagoognayd waxaa ka turjumaayay, ood wada aragteen, wajiyada iyo indhaha madaxdhaqameedyadii qabriga dushiisa ka hadlay aaska ka dib.
Muxuu u dhintay Jimcaale?
Maskax dihin oo caafimaad qabtaa waa tan dhalinta. Maskaxdaa caafimaadka qabta ayuu ahaa marxuunka shahiiday. Wuxuu u dhintay waxaa lagu soo koobi karaa laba kalmadood: Gudashada Waajibkiisa.
Haddaad meel gaaban wax ka eegto, arrinta Saylac ayaad ku soo koobi wuxuu JIMCAALE CABDI MAXAMUUD u dhintay in badana u laxaad beeleen. Wuxuu naftiisii macaanayd u seegay kuma koobna difaaca qadiyada Saylac. Wuxuu aduunka korkiisa uga hayaamay geesiga da’da yar ee hoyday waa mashruuc balaadhan oo nolosha la da’ah. Naftiisa wuxuu u huray waxa weeyi inuu dhamaan dadkiisa baro, tuso, u iftiimiyo tubta loo maro hanashada cadaalada iyo madaxbanaanida. Madaxbanaani aan dhiig ku daadana waa roob daruur la’aan da’ay. JIMCAALE wuu fahansanaa.
Geesigaa nolasha ay ka afqabatay gacan dhagaraysan wuxuu gudanaayay waajib muqadis ah oo saaran muwaadin walba. Inuu ka qayb galo banaanbax lagu cabiraayo shucuurta dadweynaha waxay ahayd waajib muqadis ah. Isagoo waajibkiisaa gudanaaya waxaa ka hor yimid Maamulkii uu nabadgelyadiisa iyo ilaalinta xaqiisa uu ka filaayay. Kii uu ku gabban lahaa ayaa u gabaday oo qudhiisii curdinka ahayd soo afjaray. Gacantii u xaqa ka eegayay ayaa naftiisii macaanayd kaga kow siisay.
Jimcaale uuma dhiman u loolanka dan u gaara, uma dhiman durduro dhalinyaranimo, uma dhiman bilaash.
Wuxuu u dhintay oo uu u badheedhay inuu si geesinimo leh u difaaco dan wadareedka qoomiyadiisa. Wuxuu u dhintay difaaca xoriyada. Wuxuu u dhintay difaaca xaqa codka dadweynaha iyo natiijada ka soo baxday. Wuxuu u dhintay difaaca mudnaanta Xeerka. Darajada ugu saraysa ee Awoodu (power) u igmantahay waa dadka. Dadkaa codkoodii iyo doonkoodii laysku dayay in laduudsiyo ayuu Jimcaalaheena hoyday u dhintay. Waa halgame u hoyday difaaca dalkiisa iyo dadkiisa. Waxa uugu muqadisan ee nafta loo huro weeyi wuxuu JIMCAALE CABDI MAXAMUUD u dhintay. Waana ta waajib inagaga dhigaysa inaan siino magaciisa ixtiraamka ugu sareeya ee bulsho leedahay, qalbigana uga ducayno.
JIMCAALE CABDI MAXAMUUD hoyay. Ugumuu horeyn uguna dambayn maayo. Wuxuu ku biiray Geesiyada aan tirsano. Wuxuu astaan nuura u ahaan doonaa jiilalka soo socda waayo JIMCAALE geeridiisu waa Cadaaladii oo dhegta dhiiga loo daray, waa Xaqii oo dulmigu ku dhagaroobay, waa Xeerkii oo wuxuush rasaas ku kala jeexeen.
Waajibaadka diineed ka sokow, xaq ayuu JIMCAALE inagu leeyahay. Xaqa uu inagu leeyahayna waxaa ka mid ah inaan ka midho dhalino wuxuu u dagaalamaayay ee uu naftiisii u huray.
U dagaalanka danta guud ayuu Jimcaale ku seegay inuu ka mid noqdo inteena xustay sanadka cusub ee 2013. Inaygay inagu xidhan tahay inaan u hiilino iskuna hiilino. Jidka taa loo marayaana waa sii wadida iyo dhamaystirka difaaca xuquuqaha aas-aasiga ah ee dadnimadeenu iyo jiritaankeenu ku xidhan yihiin.
JIMCAALOW, Illaahay ha kaa jisaa’i siiyo geesinimadaada, wadaninimadaada iyo islaanimadaada awood kuu siisay raganimo aad kula lagdanto dulinimada iyo quudhsiga, isla markaana kaa dhigay ehelka xoriyada iyo cadaalada. Noqo kii Naxariiste Eebe hagoog u noqoto. Aamiin.